Hivory miaraka amin’ireo mpandraharaha ny fanjakana • AoRaha
Inoana fa na dia kely aza ny fotoana namelabelaran’ny Filoha mikasika ny fanarenana ara-toe-karena eto Madagasikara, manoloana an’izao krizy ara-pahasalamana izao, dia hisy ventiny ny fivoriana izay nolazainy fa hifanaovan’ny fanjakana sy ireo mpandraharaha, amin’ity herinandro ity.
Voakasika manokana ny tan-tsoroka ho an’ireo sehatra tsy miankina. Hitodika amin’ny fiatrehana ny fanarenana ny toekarena aorian’ny fahamehana arapahasalamana ny fitondrampanjakana. Hampahafantarina tsy ho ela io drafitra io.
Isan’ny notakian’ny vondron’ireo mpandraharaha amin’ny sehatra tsy miankina ny fanalefahana an’ireo hetra aloa amin’ny fanjakana, izay nandrosoan’izy ireo hevitra amin’ny fanafoanana amin’ny ampahany an’ireo karazana hetra ireo mihitsy. Imasoan’ny rehetra, na dia ho sarotra aza, ny fisorohana ny fahaverezana asa.
Niezaka ny nanome toky nanoloana an’ireo solombavambahoaka ny praiminisitra Ntsay Christian, tamin’ny herinandro lasa teo, fa na eo aza ny fahasahiranana ara-toekarena tsy azo ihodivirana noho ny valanaretina dia hanao izay ho afany amin’ny fanamaivanana ny krizy aratsosialy haterak’izany ny governemanta.
Raharaha fahafatesana mpitsabo :: Navotsotra sady tsy natolotra ny Fitsarana ilay profesora